धतूरोबाट सर्प भगाउने तान्त्रीक प्रयोग
सोमवार, फ्रेवुअरी 24, 2020
दमको सफल उपचार (Successful Treatment of Asthma)
मार्च 24, 2019 मार्च 24, 2019 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments धतूरो, सर्प
धतूरोबाट सर्प भगाउने तान्त्रीक प्रयोग ! रोग लागेर मर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु ठिक हो । आज मैले यसै विषयमा साथीहरुलाई जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछु। गर्मी याममा सवैभन्दा बढी सर्पको भए हुने दिन हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । हिन्दू संस्कृतिमा तान्त्रीक जडिबुटी जसको प्रभावले सर्पलाई समेत रोक्न सक्ने भन्नेबारे अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ । यस्ता जडिबुटी हाम्रो भुमिमा छन् जसको बारेमा कतिपयलाई विश्वास नहोला तर यो गलत होइन प्रयोग गर्नु भएमा यसको लाभ देख्न सक्नुहुन्छ ।
तान्त्रीक जडिबुटीको प्रयोग
धतुरो र यसको प्रयोग
धतुरो र यसको उपयोगिता
आयुर्वेदिक जडिबुटी आँकको तान्त्रिक तथा धार्मिक महत्व
जडिबुटी अपमार्ग र यसको प्रयोग
आयुर्वेदिक जडिबुटी जामुन र यसको प्रयोग
प्रकृतिको अनुपम उपहार धतुरो यो दुई प्रकारको हुन्छ एउटा कालो र सेतो । सेतो धतुरो भन्दा बढी कालो धतुरो नेपालमा देखिएको छ । धतूरोको उपयोग थुप्रै रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यो विष भएकाले सेवन गर्नपुर्ब वैद्यको देखरेखमा प्रयोग गर्ने भनेको छ । आज मैले धतूरोबाट सर्प भगाउने तान्त्रीक प्रयोगबारे जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछु । यस्ता विषयमा जबसम्म हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामी फाइदा लिनबाट बन्चित हुनेछौं ।
﻿Like & Follow us on Facebook
धतूरोको जरालाई अश्लेषा नक्षेत्रमा घरमा ल्यायर राख्नुहोस । यसको प्रभावले सर्प घरभित्र पस्दैन यदि पसेमा पनि यसले कुनै नोक्सान गर्दैन । मैले यसको अनुभव गरिसकेको छु । सर्पको लागि यो अनौठो औषधि रहेछ ।
*डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर तथा साइन्स इन्फोटेकका सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।
← टिमुर र यसको उपयोगिता
आज विश्व क्षयरोग दिवस मनाइदै →
सर्पको जिब्रो बीचमा किन फाटेको जस्तो हुन्छ ?
फ्रेवुअरी 5, 2019 फ्रेवुअरी 5, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
जस्तोसुकै सर्पले टोके पनि निको गराउन सक्ने जडिबुटी
सेप्टेम्बर 28, 2019 सेप्टेम्बर 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
धतूरोको तान्त्रीक प्रयोग
जुलाई 12, 2019 जुलाई 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 4
5 thoughts on “धतूरोबाट सर्प भगाउने तान्त्रीक प्रयोग”
Pingback:आँकको ताँन्त्रीक प्रयोग
Pingback:बरको ताँन्त्रीक प्रयोग
Pingback:अपमार्गको तान्त्रीक प्रयोग
Pingback:के थकाई मन्त्रले ठिक हुन सक्ला ?
Pingback:धतुराको तान्त्रीक उपचारबाट यसरी रोक्न सकिन्छ असमयमा हुने गर्भपतन, जानी राखौ
कुन दिशामा सिरानी लगाएर सुत्दा के हुन्छ ?
ज्योतिषशास्त्र अनुसार मानिसको शरीरका कुन अंग फरफराए के फल ?
जीवनमा सुखी रहन यी ४ काम कहिल्यै पनि नछोड्नुस् अधुरो